အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ဗုဒ္ဓနေ့(Vesak Day) အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ထရိုင်ပူရာပြည်နယ် အဂါတာလာမြို့တွင် ဗုဒ္ဓနေ့(Vesak Day) မတိုင်မီ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်အား ရေသွန်းလောင်း သန့်စင်နေသည်ကို မေ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ထရိုင်ပူရာပြည်နယ် အဂါတာလာမြို့ Benuban Viharဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓနေ့(Vesak Day) ဘုရားရေသပ္ပါယ်နေသည်ကို မေ ၁၆ ရက်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ထရိုင်ပူရာပြည်နယ် အဂါတာလာမြို့တွင် ဗုဒ္ဓနေ့(Vesak Day) မတိုင်မီ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်အား သန့်စင်နေသည်ကို မေ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အထွဋ်အမြတ် အလေးထား ကျင်းပကြသော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဖွားမြင်တော်မူခြင်း၊ ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်း၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခြင်း၏ အထိမ်းအမှတ် ဗုဒ္ဓနေ့(Vesak Day)ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ (Xinhua)
#India, #VesakDay, #Celebration, #xinhua, #xinhuamyanmar, #အိန္ဒိယ, #ဗုဒ္ဓနေ့, #ဆင်ဟွာ
2022-05-17 09:51:08 分类： 社会
AGARTALA, India, May 17 (Xinhua) — Devotees in India celebrated Vesak, one of the most sacred days to millions of Buddhists around the world, marking the birth, enlightenment and demise of Lord Buddha.
1. A devotee cleansastatue of Lord Buddha atamonastery ahead of Vesak Day in Agartala, Tripura, India, May 15, 2022. (Str/Xinhua)
2. A devotee pours water overaBuddha statue during Vesak Day celebrations at Benuban Vihar monastery in Agartala, the capital city of India’s northeastern state of Tripura, May 16, 2022. (Str/Xinhua)
3. Devotees pour water overaBuddha statue during Vesak Day celebrations at Benuban Vihar monastery in Agartala, the capital city of India’s northeastern state of Tripura, May 16, 2022. (Str/Xinhua)
4. A devotee pours water overaBuddha statue during Vesak Day celebrations at Benuban Vihar monastery in Agartala, the capital city of India’s northeastern state of Tripura, May 16, 2022. (Str/Xinhua)
5. A devotee cleansastatue of Lord Buddha atamonastery ahead of Vesak Day in Agartala, Tripura, India, May 15, 2022. (Str/Xinhua)■